Laba wiil oo walaalo ah oo kala garan waayey xaasaskooda – hadda waxay qaadi doonaan tallaabadaan si aysan markale isugu qaldin! | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » Laba wiil oo walaalo ah oo kala garan waayey xaasaskooda – hadda waxay qaadi doonaan tallaabadaan si aysan markale isugu qaldin!
Asxaabta iyo qoyska ayaa la yaabay cabashada ka imaaneysa wiilashooda ka dib markii ay guursadeen laba gabdhood oo mataano ah oo aan sinnaba loo kala aqoon – waxayna haatan ku sameyn doonaan qalliin si ay u kala aqoonsadaan.
Arrintaan ayaa qoyska iyo asxaabta usoo ifbaxday ka dib markii mid ka mid ah wiilashaan walaalaha ah ee kala guursadan labadaan gabdhood ee isku eg hadana mataanaha ah la arkay isagoo gacanta heysta dumaashidiis, waxayna tani dhacday gabagabada xaflad heer sarre ah.
Zhao Xin iyo Zhao Xun waa labada wiil ee walaalaha kuwaasoo degan Yuncheng City – North China, waxayna kala guursadeen labada gabadhood ee mataanaha ah Yun Fei iyo Yun Yang kuwaasoo deganaa xaafad lix miles u jirta gurigooda.
Xafladdii arooskoodu waxay si wadajir ah u dhacday Maalintii Sannadka Cusub ee Shiinaha, laakiin waxay aheyd mar waalidiinta gabdhaani ay dhowr jeer kala hubiyeen inuu wiil walba xafladda arooska ka wato gabadhii uu alkuntay.
Labadaan gabdhood ee mataanaha ah waxay jiraan 22 sanno, codkooda iyo muuqaalkooda lama kala yaqaanno. Hadana waxaa lagu sameyn doonaa qalliin nuuca loo yaqaanno Plastic Surgery si nimankoodu ay u kala aqoonsadaan. Isbitaal ku yaalla magaalada Shanghai ayaana qalliinkaan ku sameyn doona.
Waxaa Aqrisay 945